Dawladnimadu "Waxey ila Tahay" Kuma Shaqeyso. Distoor Ayey Ku Dhaqantaa
Thursday January 12, 2017 - 09:15:19 in Wararka by Wariye Khaliil Barre
Ilaahey abaarta ha inaga qaado oo dhibaatadaa dadkeena heysaa dheef xalaal ah ha uugu bedelo. Dadka dhibaatadu heysataa inaga ayuunbey inala mid yihiin, balse nasiibka uunbaa iyana miyi dejiyey, inagana magaalo ina dejiyey. Waxa dhici kari laheyd ineynu halkooda ku jiri laheyn iyana halkeenaa ay ku jiri lahyeen. Ilaahey roob uumuu waayin, balse inaga ayaa la inagu imtixaamayaa. Gurmadka loo gurmanayo dadka abaartu heyso shuruud kuma xidhna. Waxa ay aheyd inan hawlaheena kale oo dhan hakino oo loo kaco dadkaasi. Waxa ay aheyd in miisaaniyadda dawladda ee 2017 ee iminka la ansixiyey Wasaarad kasta laga jaro 10% oo loo qoondeeyo taakuleynta abaaraha. Waxa ay aheyd in xildhibaanada iyo wasiirada oo ah dadaka uugu mushahar badan ay 3 bilood mushaharkooda iska gooyaan oo an uugu deeqaan gurmadka abaaraha. Waxa ay aheyd in ardeyda la baro isu naxariisashada oo inta sanaaduuq la dhigo iskuulada la yidhaa ardeygii kari kara kun shilin iyo wixii kale ee uu karo ha ku rido. Warran Cadde deyrka idaacadda waxa uu ku dhisey ardeyda ayuu weydiistey in mid kastaa keeno xabbad laban ah. Waxa ay aheyd in ummadu ay maalin jaadka ka soonto oo lacagtii ku bixi jirteyna loogu deeqo abaarta. Waxa ay aheyd in reer kasta oo magaalo jooga oo ladan uu marti geliyo reer abaarta ka soo qaxey oo bal ugu yaraan uu daaradda seexiyo, waa reer miyi oo daaradaasi oo ay seexdaan ayaaba ka badan. Bariiska yare e an cuneynana wey ianala cuni lahaayeen. Waxaasi oo dhan waxa inaga indho tirey siyaasada iyo kursi. Shicibka waa ka daacad oo dadkooda ayay u naxayaan. Siyaasiga kursigaasaa u muuqda, haddii uu arko in fursaddii uu ku heli lahaa kursigu yartahay, xaalkiisu waa aloow dhagaxyo soo daadi.
Abaarta Ilaahey ayaa keena, isagaana qaadi kara. Balse Ilaahey ummadda ayuu isu direy. Dawladnimo ayaynu sameysanney. Dawladnimadana waxa an u sameysanney iney u adeegto ummadda inta u baahan gacan qabashada. Inta ladani dawladda waxyar ayay uuga baahanyihiin, sida amniga iyo nidaamka. Dadka ladani adeygga wey iibsan karaan. Dadka dawladnimada u baahani waa inta jilicsan ee ay reer miyigu kow ka yihiin. Dawladnimada oo wiiqantaa abaar ka xun. Waxa dawladnimada iyo distoorka loo sameystey si looga baxo fikirka shakhsiga amma kooxda oo uu ina hago nidaam inoo dhex ah oo an kuligeen u hoggaansanno. Waxa waajib ah in 5 malyuun ee kala fikirka ah ee kala dabeecadda ah in ay kuligood raacaan nidaamka iyo dsitoorka. Haddii kale 3 da xisbi uun noqon meyso ee qof kasta oo kalena waxa ay isaga la tahay ayuu ku soconayaa. Taasina waa fawdo. Doorashada oo dib loo dhigaa waa bilowga fowdo cusub. Tusbax furmey ayay taladu inaga noqoneysaa, sida nidaam iyo distoor loogu soo noqdaana wey adkaaneysaa, waayo sharcigii waxa bedelaya fikir iyo caadifad. Shirkii magaalada Sheekh ee 1991 illaa kii Boorama ee 1993 illaa maanta oo 25 sanadood dawlad la ahaa, hadalkeenii iyo qaab dawladeedkeenii waxa uu dhaafi laayahay dad go’aankoodu ku dhisanyahay "Aniga waxey ila Tahay”. 5 ta malyuun ee mujtamaceena qof walba waxbey la tahay. Ma dadkoo dhan ayaa la wada dhageysanayaa markaa? Ardeyga imtixaanka dhaca fasalkii uu kal hore fadhiyey ayaa lagu celiyaa. Siyaasiga dhacaa, hore ayaabu u sii socdaa. Rubuc qarni dawladnimo ah ayaa weli waxey ila tahay la marayaa. Markad dhinac ka eegto waa saaqidnimo siyaasadeed.
Abaar iyo shaqo la’aan waxa lagaga bixi karaa Ilaahey gargaarkiisa. Fulinteedana dawlad adag iyo distoor la raaco ayaa sameyn kara. Doorashada oo an kolba dib u dhigano, farriin noocee ah ayay u direysaa Soomaaliya iyo waddamada kale ee jaarka ah? Berri waxba iskaga kaa tirin maayaan. Waayo 25 sanadood dabadood ayaan rabnaa inaan dalka ku maamulno "Waxa ay ila tahay”. Berri haddii laba beelood collaadi ka dhex dhacdo oo ay yidhaahdaan doorashada dib halanoogu dhigo inta an heshiineyno, maxaa loogu jawaabayaa. Waxa laga yaabaa inad tidhaahdo, ninku miyuu waashey xagguu isu barbar dhigaya abaarta iyo beelaha colaadooda. Halkey ku qorantahay inaan la is barbardhigin, ileyn weynagan go’aanadeenii ku saleyneyn fikir iyo waxey inala tahey uune. Melena kuma qorna in markasta oo doorasho timaadaba an marmarsiyo u sameyno.
Abaartu umada kale oo badan oo inala mid ah ayey ku dhacda. Waxa ay kaga baxaan qorshe iyo shaqo adag. Inaga abaarta saameynteedu waxa ay inagu heshey dayacnaan, maamul jileec, qorshe xumo iyo hadal aan ficil lagu dareyn. Dawladnimo iyo fikir meel ma wada galaan haddii uu fiicanyahay iyo haddii uu qaldanyahayba. Dawladnimo waa wixii lagu heshiiyey oo la fuliyo. Waa nidaamka oo la adkeeyo. Waa isla xisaabtan. "Waxey ila Tahay: maaha.